Fanafihana mitam-piadiana Naratra mafy ny lehiben’ny arofenitry ny Faritra Atsinanana
Ministeran’ny Filaminam-bahoaka Nahazo fitaovana avy amin’ny PNUD
Nanolotra fitaovana ho an’ny sampan-draharaha miady amin’ny aretina SIDA eo anivon’ny Ministeran’ny filaminam-bahoaka ny PNUD omaly.
Fanendahana teny Manarintsoa Tratran’ny polisy teo noho eo ihany ilay jiolahy
Vehivavy iray 43 taona voaendaka finday teny Manarintsoa Isotry omaly . Niantso vonjy noho izany ity farany ka tonga nanavotra azy ny mpitandro ny filaminana izay niasa teny amin’ny manodidina.
Mirongatra ny asan-jiolahy any Toamasina, indrindra ny fanendahana an-dalambe sy ny vaky trano ary ny fanafihana mitam-piadiana. Ny alin’ny talata nifoha ny omaly alarobia, tao Morarano Toamasina dia notafihin’ny jiolahy ny tranon’ny lehiben’ny arofenitry ny Faritra Atsinanana sady anisan’ny oloben’ny HVM ao Toamasina.
Voan’ny famaky ny handriny nandritra ity vaky trano ity, feno ratra koa ny vatany. Lasa avokoa ny vola sy ireo entana zakan’ireto andian-jiolahy tao aminy. Efa misokatra ny fanadihadiana ataon’ny polisy. Nanome baiko ny lehiben’ny Faritra sy ny Tonia mpampanoa lalàna ary ny Prefen’i Toamasina. Nametraka fitoriana ihany koa ny fianakaviany. Izy moa tsaboina ao amin’ny hopitaly be. Talohan’io dia lasibatra tao Tanamakoa ihany koa ny mpanangom-bokatra jirofo iray ka very vola 180 tapitrisa Ariary saika hividianana entana hamidy any Soanierana Ivongo. Renim-pianakaviana iray nitondra moto hanatitra ny zanany hianatra ihany koa no voadaroka, mbola tao Tanamakoa ihany, ka lasan’ny jiolahy mora foana ilay moto nentiny.